TOPNEWS:-Guddiga Baarlamaanka Arrimaha Diinta oo ka digey in sanadkan Soomaalida aysan gudan waajibaadka xajka | Saadaal Media
TOPNEWS:-Guddiga Baarlamaanka Arrimaha Diinta oo ka digey in sanadkan Soomaalida aysan gudan waajibaadka xajka
Guddiga Baarlamaanka u qaabilsan Garsoorka,Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ayaa ka digey in sanadkan ay xujayda Soomaaliyeed ay awoodi waayeen inay gutaan waajibaadka gudashada Xajka sababo la xiriira shirkadaha diyaaradaha ee daabula xujayda joogta gudaha dalka Soomaaliya.
Qoraal uu guddigan u gudbiyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa waxaa ay ku sheegeen in wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ay la wareegtay sanadkan arrimaha maamulk xajka.
Guddigan ayaa waxa ay sheegeen in labo shirkadood oo tan iyo burburkii xukuumadi hore ee Siyad Barre maamulaysay arrimaha xajka haatan lagu soo kordhiyay shirkado kale oo aan ruqsad ka heysanboqortoyada Sacudi Carabiya isla markaana haysan diyaarado tegi kar sacudi Carabiya.
Ugu dambeyn guddiga ayaa waxa ay ku baaqeen in xukuumada si dhaqso ah wax uga qabato arrimaha horyaal gudashada xajka oo haddii aan wax laga qaban suurtogal ka dhigeysa in dadka Soomaaliyeed aysan awood u helin inay gutaan waajibaadka Xajka.
Khilaafka ka dhex jira arrimaha xajka ayaa loo aaneynayaa inuu xilkiisa ku waayay Wasiirkii Owqaafta iyo Arrimaha Diinta oo dhowaan Ra’iisul wasaare Kheyre xilka ka qaaday.